Ihe nkwụnye ọkụ na mpụga Kdị K - mgbasa mgbasa dị iche iche maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
A na-eji Kdị K eme ihe naanị na Denmark na Greenland. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị K)
A kọwara ọkọlọtọ Danish na DS 60884-2-D1. N'adịghị ka ndị yiri ya ụdị E nkwụnye, a naghị etinye ntụtụ ahụ n’ime ebe a na-anabata ihe, kama ọ dị na plọg n’onwe ya. Ube a na-ahụbe U-14 dị ogologo 4 mm, ọ dị 6.5 mm n'obosara ma nwee dayameta 4.8. Ahịrị na atụdo na-anọpụ iche nke ụdị K bụ okirikiri ma nwee dayameta 19. Ha dị 19 mm n'ogologo ma ebe etiti ha dị 13 mm iche. Oghere dị n'etiti etiti mkpụrụ etiti na etiti etiti ahịrị ahụ na-ejikọ ike abụọ ahụ bụ 16 mm. E dere nkwụnye ahụ na XNUMX A. A ụdị C plọg dabara nke ọma na ụdị K Socket. Danish nwere ike ịnabata plọg ụdị E na F: agbanyeghị, enweghi njikọ dị na pọks ndị a n'ihi na achọrọ nwoke pin pin na plọg ahụ. N'ihi nnukwu ego nke ngwa ndị Europe ebubatara nke dabara E/F plọgị, gọọmentị Danish kpebiri ime ka ọ bụrụ nke iwu iji wụnye ụdị E or F sockets kwa. Yabụ, atụmanya bụ na, n'ikpeazụ, ọkọlọtọ European ụdị F anya (ma ọ bụ - mana nke a adịchaghị obere - nke a anaghị ejikarị ya ụdị E) ga-emesịa dochie ụdị Danish a.